Raheem Sterling oo fariin u diry kooxda Liverpool kahor kulanka khamiista – Gool FM
(Manchester) 01 Jan 2019. Xidiga kooxda Manchester City ee Raheem Sterling ayaa xaqiijiyay in Sky Blues ay awoodo inay ka badiso Liverpool, isla markaana farqiga dhibcaha ay ku soo yareyso 4 dhibcood oo kaliya, kulanka soo aadan ay ku wada ciyaari doonaan khamiista horyaalka Premier League.
Raheem Sterling ayaa ayaa qiray inuu si weyn u xiiseenayo inuu kahor yimaado kooxdiisii hore ee Liverpool oo qaadaneysa mid ka mid ah xili ciyaareedyadeeda ugu fiicnaa, wuxuuna kulankoodan noqon doonaa mid weyn.
Sterling ayaa kahor kulankan sheegay: “Hadii aan u ciyaarno sida aan naqiinay waan garaaci karnaa koox kasta”.
“Kulanka Khamiista ee kooxda Liverpool wuxuu noqon doonaa mid cajiib ah waxaana rajeyneynaa inaan badino”.
“Saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee aan ciyaarnay ayaa si wacan ku bilowanay, waxaan dhalinay goolka furitaanka, ka dibna waxaa nagu dhacay hoos u dhac”.
“Laakiin maskaxdeena ayaa ahayd mid aad u fiican kulankii Southampton, waxaan ku soo bandhignay ruux awood badan”.
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Liverpool oo ka jawaab celiyay hadal uu dhawaan sheegay Guardiola